न्यूजलय शुक्रबार ०९, साउन २०७७
आजभोलि म कार्यलयको नियमित काममा....
न्यूजलय बुधबार ३१, असार २०७७
यतिखेर स्थानीय तहहरु नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को लागि बजेट बनाउने क्रममा छन् । विभिन्न वडाहरुका आफ्ना आफ्नै योजनाहरु बजेटमा परेका छन् । यसै सन्दर्भमा बरहक्षेत्र वडा नं.९ का वडा अध्यक्ष दिपक लिम्बूसंग हामीले वडाका विविध विषयहरुमा कुराकानी गरेका छौं । न्युजलयका लागि ज्योती पोख्रेलले....
यतिखेर स्थानीय तहहरु नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि बजेट बनाउने क्रममा छन् । विभिन्न वडाहरुका आफ्ना आफ्नै योजनाहरु बजेटमा परेका छन् । यसै सन्दर्भमा बरहक्षेत्र वडा नं.५ का वडाअध्यक्ष राजु अधिकारीसंग हामीले वडाका विविध विषयहरुमा कुराकानी गरेका छौं । न्युजलयका लागि ज्योती पोख्रेलले गरेको....
नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट प्रालि पुर्वी नेपालमा स्थापित सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग हो । यस उद्योगले उत्पादन गर्ने बन्धन सिमेन्ट निकै लोकप्रिय हुँदै गएको छ । साना घरदेखि अरुण तेस्रो परियोजनासम्म बन्धन सिमेन्ट प्रयोग भइरहेको छ । गुणस्तरीयतामा सम्झौता नगर्ने उत्पादक कम्पनिको प्रतिबद्धताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा....
न्यूजलय शुक्रबार ०९, फागुन २०७६
इटहरीमा जुटको विकासको लागि जुट विकास अनुसन्धान केन्द्र स्थापित छ । यो कार्यालय जुटको बिउ उत्पादन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा सक्रिय छ । तर पछिल्लो समयमा आएर जुटप्रति किसानको आकर्षण छट्दो छ । यसले कार्यालयको पहिलाको जस्तो आकर्षण देखिँदैन । तर त्यसका पछि धेरै समस्याहरु छन्....
न्यूजलय शनिबार २५, माघ २०७६
बन्धन सिमेन्ट पुर्वी नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग हो । अत्याधुनिक प्लान्टबाट उत्पादिन बन्धन सिमेन्ट गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने ब्राण्डका रुपमा पनि चिनिन्छ । नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट प्रालिको उत्पादन रहेको यो सिमेन्टले छोटो समयमै लोकप्रियता हाँसिल गरेको छ । सिमेन्टका सञ्चालक हरिवंश राठीसँग न्युजलयका लागि हिमाल....
‘पुर्वमा पनि चन्द्रागिरी हिल्स जस्तै पर्यटकीय स्थल बनाउने सोँच छ’ (भिडियो)
न्यूजलय शुक्रबार १७, माघ २०७६
इटहरी । तपाई काठमाडौ नजिकैको पर्यटकीय स्थल चन्द्रागिरी हिल्स पुग्नुभएको छ ? छ भने तपाई पक्कै छक्क पर्नुभयो होला । राजधानीभन्दा परको डाँडोमा सुविधासम्पन्न होटल, लज, विशाल मन्दिर अनि केवलकारको सुविधा पुर्याइएको छ ।
पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानसँग जोडिएको र धार्मिक, प्राकृतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण....
न्यूजलय सोमबार १३, असोज २०७६
हेमकर्ण पौडेल इटहरीको राजनीतिमा चर्चित नाम हो । इटहरीको नगर सभापती हुँदै प्रदेश सभाको उम्मेदवारसम्म भइसकेका पौडेल वाककलामा पनि निपुण छन् ।
नेपाली कांग्रेसले गरेको जागरण अभियानका क्रममा विभिन्न ठाउँमा प्रशिक्षणसमेत चलाईसकेका उनी आफ्नै पार्टी र नेताको खरो आलोचना गर्छन् ।
न्युजलयसंग उनले पार्टी र....
न्यूजलय आइतबार १२, असोज २०७६
रामधुनी नगरपालिका पूर्वको विकासोन्मुख नगर हो । धार्मिक, पर्यटकीय, आर्थिक सबै हिसाबले महत्वपूर्ण यो नगरको वडा नं. ५ बजार क्षेत्र हो । सडक, ढल निकास तथा पूर्वाधार यहाँको मुख्य चासोका विषयहरु हुन् । वडावासीको विकास चाहना र समग्र विकासको बारेमा वडाध्यक्ष डेगराज फुँयलसँग ज्योति पोख्रेलले....
न्यूजलय बिहीबार ०९, असोज २०७६
इटहरी । हरिनगर गाउँपालिकाको मुख्य समस्या सुनसरीे खोला रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारीले बताएका छन् ।
सुनसरी खोला नियन्त्रणको विषयमा संघिय सरकार र प्रदेश सरकारसँग कुरा राखेको उनले बताए । इनरुवादेखि बोर्डरसम्म नदी नियन्त्रण भएमा उक्त क्षेत्र पञ्जाब जस्तो प्रगति हुने उनले बताए ।